Soomaaliya: Munaasibad Dawladda Qadar Kaga Dhawaaqday Dhismaha Dekedda Hobyo | #1Araweelo News Network
Muqdisho(ANN)-Wasiirka Dekeddaha ee dalka Qadar, Jassim Bin Saif Ahmed Al Sulaiti iyo Wasiirka Dekeddaha Dawladda Federaalka ee Soomaaliya, Marwo Maryam Aweys Jaamac, ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay dhismaha Dekedda qadiimka ah ee Hobyo oo ku taal gobolka Mudug, isla markaana usii jeeda Badweynta India.
Munaasibada lagaga dhawaaqay dhismaha dekeddaa oo lagu qabtay xafiiska Ra’iisal Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya, Xasan Cali Khayre, waxa goob joog ka ahaa Ra’iisal Wasaare Khayre, ku–xigeenka, wasiirka arrimaha dibadda Qatar, madaxweynaha Maamul goboleedka Galmudug, qaar kamid ah xildhibaannada labada gole, wasiirro iyo wasiirro ku-xigeenno ka tirsan xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
Wasiirka dekaddaha Qatar Jassim Bin Saif Ahmed Al Sulaiti, ayaa uga mahadceliyay soo dhaweynta ballaadhan ee loogu sameeyo Muqdisho Ra’iisal Wasaare Khayre iyo xukuumaddiisa, wuxuuna sheegay in dekadda Hobyo loo dhisayo habka ugu casrisan ee dekad loo dhiso, laga billaabo maantana laga howl gelayo qorshaha dhismaheeda, si shacabka Soomaaliyeed ay uga faa’iideystaan.
Masuuliyiinta Qadar iyo Dawladda Federaalka ee Soomaaliya kulanka Dekedda Hobyo dhismeheeda lagaga dhawaaqay 19 August 2019.
Sidoo kale, Wasiirka dekaddaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Marwo Maryam Aweys Jaamac, ayaa caddaysay in billaabidda dhismaha dekadda Hobyo ay muhiim u tahay shaqo abuurka dhallinyarada Soomaaliyeed iyo horumairnta dhaqaalaha dalka.
Horraantii bishii December ee sannadkii 2018, waxay dowladaha Soomaaliya iyo Qatar magaalada Dooxa ku kala saxeexdeen heshiisyo horumarineed oo ay kamid tahay dhismaha dekadda Hobyo, waxaana xilligaas wasiirka dekaddaha Qatar, oo kulan gaar ah la qaatay Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre uu ballan qaaay in dowladda Qatar sida ugu dhaqsaha badan u billaabayso mashruuca dhismaha dekaddaa.
Dhinaca kale Dekedda Hobyo oo ka mid ah Dekeddaha ugu caansan Soomaalida ee dabiiciga ah, waxayna usii jeedaa Badweynta India, isla markaana ka mid ah dekeddaha xilliyo horre la isticmaali jiray, balse xidhmay oo aan dhaqdhaaq ganacsi kajirin, waxayna intan danbe xarun u ahayd kooxo Budhac-badeed ah iyo Kaluumaysato.
Dadka deegaanka Mudug, waxay dhismaha Dekedda Hobyo u leedahay ahmiyad weyn dhanka ganacsiga iyo horrumarka.